Ethiopia Oo Lix Askari Ka Dishay Suudaan. | Hargeysa World~Herald
Ethiopia Oo Lix Askari Ka Dishay Suudaan.
UncategorizedEthiopia Oo Lix Askari Ka Dishay Suudaan.
Lix askari oo ka tirsana militarig Suudan ayaa Sabtidii lagu dilay weerar ay ciidammada Itoobiya ku qaadeen fadhiisin ay ciidamada Suudaan ku leeyihiin meel u dhow xuduudda u dhaxaysa dalalkaas, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen ilo-wareedyo militariga Suudaan ah.
Hamdok ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in Sarreeye Guuto Anan Hamed Mohammed Omar loo magacaabay taliyaha cusub ee booliiska, halka ku xigeenkiisana loo magacaabay Major General Muddathir Abd al-Rahman Nasr al-Din.